Inkcazo ye-Meta-Isotretinoin yonyango olune-ultra-effective acne. Apha, uya kubona i-isotretinoin ukuhlaziywa, i-isotretinoin isebenzayo, iziphumo zecala le-isotretinoin kunye nolunye ulwazi malunga neyeza, kubandakanywa nemilinganiselo kunye nemilinganiselo yokuqapha. Yintoni i-Isotretinoin (Accutane)? Ngaba ucinga nge-isotretinoin eluhlaza (Isotretinoin 4759-48-2)? Ewe, xa ungaziqhelani nalo, i-Isotretinoin [...]
Yintoni iRaw Proviron (iMesterolone)? I-mesterolone ebomvu i-powder crystalline, emhlophe ukuba iluhlaza kwaye ayichithe emanzini. Iyaziwa ngokubizwa ngegama layo, igama leproviron. Iprogram nganye yeproviron / ipilisi iqulethe nge-25mg ye-mesterolone powder. Ngenxa yesi sizathu, [...]